State Nebraska keessati jia May keessa kan ture irraa namni virus kanaan qabamu akka harka 40%
Published October 16, 2020 at 10:13 PM CDT
State Nebraska keessati jia May keessa kan ture irraa namni virus kanaan qabamu akka harka 40% guddate yoo tau sababa Kanaan hospitaalonni baaye seeran qaraa jaraati akka deebian himan. Nebraska guyyaa tokko keessati namni haarawa 1000 ol guyyaa tokkoti kan qabame yoo tau kan duemmoo 5 dha.
Governor Ricketts akka jedhetti bilisummaaa namaatif jecha seera kana deebisun akka itti ulfaate hime. Garuu dandeetti hospitaal eegani turuun bareeda.
Ogeesi fayya akka jedhetti wanna sadiin kana irra of eegu, kuni nama baayen walgahuu, bakka dhoogamanii fi namatii kaluu.
Torbaan kanniin keessa erga namni qabamuu bayata dhufee booda hospitaalota Iowa keessati bakkii ciisan xiqqaate jira.
State se’ati 24 keessati namni 16 haarawa akka duan gabaasan, kan Woodbury County 3 dabalaatee, waliigalatti namni qabame 1,300 dha.
Aanan mana barumsa Sioux City nama qabame kan torbaan kana gad dhiisaniiru. Barrattoota darzaanan lakkaahaman fi hojjattooni bakka gamoodhan saddeetan keessa qabamaniiru. Kunis torbaan kana dura qabamiin tokkoma .akka aanaatti inni guddaan 32 dha. Yeroo kanatti barumsaa kamuu jarjaraan kana barumsa online irrati hin deebisne.
Mana fayya Sioux land akka jedheti bakka barumsaa namni qabamu kan mulattuu kun sochii irraa kan ka’ee fakkaata jedhan akkasuman kan akka cidhaafi bakka ummani walgahuudha.
Dabalataanis, kan amma dhukubni kun irrati baayatu nama umriin isaani 20-40 jiduu jiranirrati.
Depramnatiin fayyaa akka gabaasa torbaani himutti torbaan lamaan darbe keessa namni virus qabamu akka baaye dabale mullisa. Ogeessi akka jedhutti seera addaan baafani taa’u dhiisu fi seera dhukubicha kabajuu dhabuun akka dhukkuba kana baayise dubbatan.
Sababa Covid-19 namni hospitaala galu Iowa keessati guyyaan akkuma dabalaa deemu jira.Akka biyyati guututi namni hospitaala galee jiru 473 dha, namni 63…
Iowa keessasti guyyaa tokko namni covid-19 qabame 1,400 dha, nama 90 Woodbury County keessa dabalate
Iowa keessasti guyyaa tokko namni covid-19 qabame 1,400 dha, nama 90 Woodbury County keessa dabalatee. Manni fayyaa Siouxland namni tokko dabalataan…